Ingabe amagagasi abandayo ahlobene nokushintsha kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kungenzeka ukuthi ngalesi sikhathi ungabaze ukuthi ushintsho esimweni sezulu luyenzeka ngempela noma qha, okunengqondo ngezinga elithile kusukela ukuwa kweqhwa okwenzeke eSpain kulezi zinsuku kubonakala kukhombisa okuphambene nalokhu.
Nokho, kulula kakhulu ukudida amagama athi isimo sezulu nesimo sezulu. Banobudlelwano obuseduze, kepha abafani: ngenkathi eyokuqala ibhekisa kumanani athile endawo ethile, eyesibili ibhekisa kule datha efanayo kepha esikhathini eside esizayo.
Ukubheka lokhu, amagagasi amakhaza nokushisa, izikhukhula, izivunguvungu nezinye izinto ezivela esibhakabhakeni yimicimbi ethize ukuguquguquka kwesimo sezulu okungavimbeli kepha kuyashintsha. Njengoba kuchazwe yisazi sezulu se-AEMET u-Ernesto Rodríguez Camino kungosi I-Hypertextual, »Lapho sinezinguquko esimweni sezulu, esizibonayo nesibhekele ikusasa, enye yezinto ebonwayo ukuthi izinto ezimbi kakhulu ziyashintsha. Ungashintsha amandla, imvamisa ... izehlakalo ezibandayo zivame ukuba ngaphansi kwenombolo futhi zibe namandla kakhulu. Kepha lokho akusho ukuthi bayacindezelwa nokuthi lapho kuvela eyodwa, ukuguquguquka kwesimo sezulu kubuzwa.
Ngaphandle kokuthi leli gagasi elibandayo esibhekene nalo libukeka njengomcimbi ohlukile, akusikho okokuqala ukuthi kwenzeke futhi ngeke kube elokugcina. Emlandweni wethu wakamuva kakhulu, siqokomisa amagagasi abanda kakhulu alandelayo eSpain:
Kusukela ngoDisemba 13 kuya ku-29, 2001: ngesikhathi esiyizinsuku eziyi-17, izinga lokushisa elincane kwaba ngu -15ºC futhi lathinta izifundazwe ezingama-32.
Kusuka ngoFebhuwari 8 kuya ku-15, 2012: ngobude bezinsuku eziyi-7, izinga lokushisa eliphansi elirekhodiwe lalingu -20ºC. Kuthinte izifundazwe ezingama-30.
Lezi zimo zamazinga okushisa aphansi kanye nokuwa kweqhwa kungenye yezinto ezingabikezela kangcono, ukuze abantu baziswe kusenesikhathi ukuze bakwazi ukuthatha izinyathelo ezidingekayo futhi ngaleyo ndlela bagweme izinkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ingabe amagagasi abandayo ahlobene nokushintsha kwesimo sezulu?